Wararka - Oggolaanshaha UL - Qaboojiyaha ku shaqeeya BlackShields DC wuxuu gudbay shahaadada UL
BlackShields waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo in 2 nooc oo ah qaboojiyaha hawada ku shaqeeya ee DC kaas oo loo habeeyey macmiilka Mareykanka uu ku aflaxay oggolaanshaha UL. Baaritaano iyo kormeer badan ka dib, Shaybaarada Hoosta waxay saxiixday ogolaanshaha UL ee 2 nooc ee qaboojiyaha DC.
Waxaan ku faaneynaa in qaboojiyaha ku shaqeeya DC uu ku qalabeysan yahay qalab kontorool oo ay ku jiraan kontaroolaha, darawalka DC Compressor iyo ilaalinta hillaaca kaas oo ah R&D BlackShields. Tani waxay ka dhigan tahay BlackShields waxay siin kartaa qaboojiye DC oo kala duwan oo leh ogolaanshaha UL marka la eego codsiga macmiilka.
BlackShields waxay soo saartaa qaboojiyaha DC-ga kaas oo si weyn looga isticmaalo goobaha Isgaadhsiinta iyada oo aan lahayn koronto ama isticmaalka koronto isku-dhafan.
Qaboojiyaha DC waxa ku qalabaysan kombaresarada True DC ku shaqaynaysa (ma laha inverter) iyo taageerayaasha DC kuwaas oo hagaajin kara xawaaraha ku salaysan codsiga qaboojinta ee golaha wasiirada. Korontada korantada DC-ga ee golaha qaboojiyaha waa -48V kaas oo si toos ah ugu shaqayn kara baytariga goobaha. Compressor-ka DC wuxuu u bilaabi karaa si tartiib ah si uu uga fogaado qulqulka qulqulka si uu u waxyeeleeyo koronto-dhaliye.
BlackShields waxay bixisaa qaboojiye ku shaqeeya DC (awood qaboojinta laga bilaabo 300W ilaa 4000W) codsiyo kala duwan.
Fadlan nala soo xiriir wixii faahfaahin dheeraad ah.
Waqtiga boostada: Jul-29-2021